I-Raw Cetilistat (i-Oblean) ipowder (282526-98-1) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / I-Fat Loss powder / Cetilistat (Oblean) powder
2.60 ngaphandle kwe 5 ngenxa ye 10 amanqaku umthengi
SKU: 282526-98-1. Udidi: I-Fat Loss powder
Cetilistat (Oblean) i powder video
I-Cetilistat (i-Oblean) i-powder base-Characters
Umjikelezo we-Cetilistat (Oblean)
Amagama eKhemikhali: I-Cetilistat powder
Amagama ebhanti: i-powder oblean
I-Cetilistat (i-Oblean) Ukusetyenziswa kwePowder
I-Cetilistat (i-Oblean) i powder iyimithi ye-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathumbu. Ngaphandle kwe-enzyme, i-triglycerides ukusuka ekudleni iyakhuselwa ekubeni i-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids kwaye ishiywe ukuba idibene. Esi sigqirha, ngelixa zifana ne-powder ye-drug-list ye-FDA, i-powder, ingaba neprofayili echaphazelekayo yecala ngenxa yesakhiwo esithile se-molecular. Icandelo le-2 lihlolisise i-612 obese, izifundo zesifo sikashukela nge-BMI ye-28 ukuya kwi-45 kg / m2 kwixesha le-12 yeveki. I-Cetilistat powder i-80 kunye ne-120 mg ikhuthaza ukulahlekelwa kwesisindo esikhulu xa kuqhathaniswa ne-placebo (3.85 kg kunye no-4.32 kg no-2.86 kg, ngokulandelanayo). Ukulahleka kwesisindo somzimba we-powder isisindo esifana nokulahlekelwa kwesisindo esiphumelelwe nge powder orlistat (3.78 kg). I-Cetilistat powder yayinyamezeleke kwaye yabonisa ukuyeka okuncinane ngenxa yeziganeko ezingathandekiyo kwiindawo ze-placebo kunye namacandelo e-orlistat powder. Ngenxa yokuba ukuyeka kweqela le-orlistat libi kakhulu kuneqela le-120 mg i-Oblean powder kunye namaqela e-placebo, kwaye yayingenxa yeziganeko ezimbi zesisu, i-Cetilistat powder ingaba yi-lipase inhibitor ekhethiweyo yokuphumeza ukulahleka kwesisindo. Izilingo ze-3 ze-Oblean powder ziqhubela phambili eJapan.
Iyiphi imilinganiselo ye-Oblean powder
Isilwanyana se-Oblean powder sinikwa njenge-60mg iifomsi zamandla zokulawula ngomlomo. Iyeza lithathwa ngokutya ukuqinisekisa ukuba lisebenza ngelixa ukutya kukugaya, ukwenzela ukuba ukuxutywa kwamafutha ukusuka ekudleni kunokunciphisa ngempumelelo. Ugqirha wakho uya kukucebisa malunga nokuba ungakanani unyango onokuthatha kunye nomthamo ngamnye, njengama-wellas efunekayo imihla ngemihla. Kubaluleke ukuba uhambelane nale miyalelo. Musa ukuthatha okungaphezulu kunokuba ugqirha wakho akuxelele ukuba uthathe.
Indlela i-Cetilistat powder isebenza ngayo
I-Cetilistat powder iyinkunkuma yokulahleka kwesisindo esisetyenzisiweyo kunye ne-calorie ephantsi yokutya. Isebenza ngokuthintela inani elikhulu lamanqatha ukusuka ekutyiweyo kunye nokufakwa emzimbeni. Oku kulahleka kwe-weight powder kukwahlula njenge-lipase inhibitor kwaye isebenza ngokuthe ngqo kwindlela yokugaya ukutya apho ikhupha inyathelo le-enzyme ye-lipolytic ebizwa nge-lipase. Ezi lipases yinto umzimba osetyenziswayo ukugaya amanqatha. Nangona kunjalo, xa eli liyeza lilawulwa kunye nomtya, libophezela kwi-lipases, ngaloo ndlela libavimbela ukuba bangaphuli amanqatha. Amafutha angenayo i-hydrolyzed esikhundleni salolu hlobo, adala ukunyuka kwamafutha e-fecal nokunciphisa amafutha. Xa zisetyenziselwa kunye nokunciphisa i-calorie yokutya, kunokunceda ukuphucula ukulahleka kwesisindo kunye nokwenza kube lula ukuba izigulane ezigqithiseleyo zibuye zibuyiselwe, ngoko kukuphucula amathuba okulahleka kwesisindo. Indlela yokusetyenziswa ngayo iyafana ne-oldlist ye-orlistat powder ngokuvimbela i-pancreatic lipase.
I-Cetislim ayisoloko ikulungele zonke izigulane. Njalo qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokusebenzisa le myeza ukuba ukhulelwe, uncelisa, uzama ukukhulelwa, usebenzisa nayiphi na imachiza (imithi okanye imithi engekho myalelo), usebenzisa nayiphi na imveliso yemveliso okanye i-supplementary, okanye ukuba unayo i-allergies okanye enye impilo iingxaki.
Imilinganiselo echanekileyo ye-Oblean powder kunye nemithi yesigxina ixhomekeke kwisigulane kunye nemeko ephathwayo. Musa ukulungelelanisa umthamo wakho ngaphandle kwemvume yomboneleli wakho wezempilo. Lo mveliso usebenza kuphela njengoko uchazwe kwaye uyalelwe.
I-Cetilistat (i-Oblean) I-powder Marketing
Ngaba i-Cetilistat (i-Oblean) ipowder inayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
Izigulana ezithotyelwa unyango lokunyanyisa ne-Cetislim powder zingabangela igalelo. Kumele uxelele ugqirha wakho ukuba oko kwenzeka. Ezinye izibonelo zinikwe apha:
Indlela yokuthenga i-Oblean powder: Thenga i-Cetilistat powder esuka kwi-AASraw
I-AASraw inikeza ubungqina 99% Cetilistat powder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iibhabhi zangaphantsi zokusetyenziswa komlomo.
Ukupheka kweePowula eziPhephayo:
I-Cetilistat powder powder eluhlaza okwehliswa kwesisindo